पन्चे चोर देश छोड यस्तै उग्रनाराहरु लागेको यी कानमा कताकता गुन्जिए जस्तो लाग्छ । खै किन त्यस्ता नारावाजी लगाइयो, त्यतिबेला मलाइ थाहा थिएन । पन्चे भनेको के हो ? त्यो पनि मलाइ थाहा भएन । बस नारा गुन्जीएको मलाइ एकदम याद छ । मलाइ लाग्छ सायद मेरो बाल्यकालको सबभन्दा अन्तिम बिन्दुको सम्झाना त्यही हो । अर्थात त्यसभन्दा अगाडीका यादहरु मसँग छैनन । मलाइ याद छैन अहिले । सबैभन्दा पुरानो याद हो यो । साझ भनौ या बेलुका भैसकेको थियोहोला, झिसमिसे रात परेको जस्तो लाग्छ । घरभित्र अगेनाको छेउमा बसेको थिए म । बुबा अर्को पट्टी ओछ्यानमा टाउकोमुनी दुइवटा हात अड्काएर उत्तानो परेर सुत्नु भएकोथियो । साइडमा रेडियो राख्नुभएको थियो । बुबाले त्यो रडियो बजाइ राख्नुहुन्थ्या । बेट्टरी राखेर बजाउनुहुन्थ्यो । रेडियो बजाउन एब्रेडी बेट्टरी किनेर ल्यानुहुन्थ्यो बुबा । सकिएका बेट्टरी उरुम(मकै राख्ने ठाँउ)को पकसा(फल्याम)मा सुकाउनुहुन्थ्यो । घाममा सुकाएका बेट्टरी पछि रेडियोमा राखेर बझाउनुहुन्थ्यो । बुबाले रेडियोमा रेडियो नेपाल बजाउन्थ्यो ।यतीबेला घटना र बिचार कार्यक्रम बजे जस्तो लाग्छ । त्यो कार्यक्रमको धुन अहिले पनि याद छ मलाइ । ढुकुस ढुकुस ढ्या …नमस्कार, घटना र बिचारमा हार्दिक स्वागत छ भनेको सम्झन्छु । म जाह(आजकाल हाफ पेन्ट) लगाएर बसेको थिए । ठिक त्यही बेला घर बाहिरी बाटोमा जसलाइ हामी मैदान भन्थ्यौ त्यहा नारा लगाएको होला । नारा सुनेपछि हामी जराकजुरुक उठेर बाहिर हेर्न गएका थियौ । त्यो नारा कसले लगाए त्यो मलाइ अहिलेसम्म थाहा छैन । प्रजातान्त्रबादिले प्रजातान्त्र पुनःबहालिको लागि नारा लगाएकाथिए । साझ राके जुलुसमा को को थिए थाहा भएन । त्यो समय अहिले अनुमान लगाउदा त्यो २०४६ देखि २०४७ को अबधिमा हुनुपर्छ । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःबहाली भएको थियो । २०४७ मा संविधान लेखिएको थियो । सायद बहुदल घोषणा भएको वरीपरीको दिन होला वा राजा र पन्च्यात समर्थकले कतै संविधान लेख्न अबरोध गरेकोकारण संबिधान लेख्नको लागि दबाब दिएको जस्तो लाग्छ त्यो नारा मार्फत ।
–संस्मरण ःजन्मभुमि( छैटौ भाग)
छोरा जन्माउने आशामा १३ सन्तान!
यसपटक संसदको मञ्चमा अटाएनन् उपराष्ट्रपति
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र चीनको कान्छु प्रदेशका…
अक्षय कुमारमाथि करीनाले यति थुकिन् कि, फेरि…